ဟဒီးဆ်: အသင်တို့သည် မိမိတို့၏အိမ်များကို ကဗရ်သင်္ချိုင်းများအဖြစ် မပြုလုပ်ကြလေနှင့်။ ဧကန်မုချ ရှိုင်သွာန်သည် အကြင်အိမ်မှထွက်ပြေးသည်။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: အသင်တို့သည် မိမိတို့၏အိမ်များကို ကဗရ်သင်္ချိုင်းများအဖြစ် မပြုလုပ်ကြလေနှင့်။ ဧကန်မုချ ရှိုင်သွာန်သည် အကြင်အိမ်မှထွက်ပြေးသည်။
အမျိုးအစား: ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်နှင့် ၎င်း၏ ပညာရပ်များ။ . ကျမ်းမြတ် ကုရ်အာန်၏ ထွတ်မြတ်မှုများ။ . အာယာသ်များနှင့် စူရဟ်များ၏ ထွတ်မြတ်မှုများ။ .
အဗူဟုရိုင်ရဟ်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ရစူလ်တမန်တော်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်) မိန့်ကြားတော်မူသည်။ အသင်တို့သည် မိမိတို့၏အိမ်များကို ကဗရ်သင်္ချိုင်းများအဖြစ် မပြုလုပ်ကြလေနှင့်။ ဧကန်မုချ ရှိုင်သွာန်သည် စူရဟ်ဗကရဟ်ရွတ်ဖတ်သော အိမ်မှထွက်ပြေးသည်။
အဗူဟုရိုင်ရဟ်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)က ပြောပြခဲ့သည်မှာ တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)သည် နေအိမ်များတွင် ဆွလာသ်ဆောက်တည်ခြင်း၊ ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ရွတ်ဖတ်ခြင်းတို့ မပြုဘဲသင်္ချိုင်းများကဲ့သို့ ပြုလုပ်ထားခြင်းမှ တားမြစ်ထားသည်။ ဆွလာသ်ဆောက်တည်ခြင်းမရှိသော အိမ်များကို သင်္ချိုင်းများဟု ခေါ်ဆိုထားခြင်းမှာ သင်္ချိုင်းများ၌ ဆွလာသ်ဆောက်တည်ခွင့် မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)က မိန့်ကြားတော်မူသည်မှာ အမှန်ပင်ရှိုင်သွာန်သည် အိမ်သူအိမ်သားများက စူရဟ်ဗကရဟ် ရွတ်ဖတ်သည့်အိမ်မှ ထွက်ပြေးလေသည်။ထိုသို့ထွက်ပြေးရခြင်းမှာ စူရဟ်ဗကရဟ်ရွတ်ဖတ်သည့် ဗရကသ် မင်္ဂလာတော်နှင့် အိမ်သားတို့က ယင်းစူရဟ်တွင် ပါရှိသည့်အတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးကြသည့်အတွက် ရှိုင်သွာန်သည် ၎င်းတို့အားလှည့်ဖျားရန်နှင့် လမ်းမှားစေရန်အတွက် မျှော်လင့်ချက်မဲ့သွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
စူရဟ်ဗကရဟ်၏ မွန်မြတ်မှုကို တင်ပြထားသည်။
ရှိုင်သွာန်သည် စူရဟ်ဗကရဟ်ဖတ်သည့် အိမ်မှထွက်ပြေးပြီး အိမ်အနားပင်မကပ်ပေ။
ကဗရ်သင်္ချိုင်းများတွင် ဆွလာသ် ဆောက်တည်ခြင်း မပိုင်ပါ။
အိမ်များတွင် အိဗာဒသ် မြားမြောင်စွာပြုလုပ်ခြင်း၊ နဖ်လ်ဆွလာသ်များဆောက်တည်ခြင်း မွတ်စ်သဟဗ်ဖြစ်သည်။
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်နှင့် ၎င်း၏ ပညာရပ်များ။ . ကျမ်းမြတ် ကုရ်အာန်၏ ထွတ်မြတ်မှုများ။ . အာယာသ်များနှင့် စူရဟ်များ၏ ထွတ်မြတ်မှုများ။ .
မည်သူမဆို စူရဟ်ဗကရဟ်၏ နောက်ဆုံးနှစ်အာယသ်ကို ည၌ရွတ်ဖတ်လျှင် ၎င်းသူအတွက် လုံလောက်သွားပြီဖြစ်သည်။